ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ဆိုင်မှာ လှလှလေး ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုက်ဗိုက်လေးနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင် – Zeekwat Hot News
May 17, 201904225
မကြာသေးခင်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက ဘားလေးကို စန္ဒီမြင့်လွင်က သွားရောက်ခဲ့ပြီး လှပတဲ့အခန်းအပြင်အဆင်ချက်များနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဗိုက်ဗိုက်လေးနဲ့ ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ပုံလေးများကို ဒီးဒီက သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားခဲ့ပါတယ်။
စန္ဒီမြင့်လွင်တို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးက အာထရောင်ဆောင်းထဲက သမီးလေးရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်များကို ကြည့်ပြီး ကြည်နူးပီတိတွေဝေခဲ့ကြပါတယ်။ စန္ဒီမြင့်လွင်ကတော့ သမီးလေးကို အဖေတူသမီးလေးလို့ ကောက်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
ဒီးဒီရဲ့ကိုယ်ဝန်က တဖြည်းဖြည်းရင့်လာတာနဲ့အမျှ လတ်တလောမှာတော့ အနုပညာအလုပ်များ ရပ်စဲထားပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ဆိုင်အတွက် လိုအပ်သမျှကို တတ်နိုင်သမျှ လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မကွာသေးခငျက ခငျပှနျးဖွဈသူ ဖှငျ့လှဈထားတဲ့ ရနျကုနျမွို့တှငျးက ဘားလေးကို စန်ဒီမွငျ့လှငျက သှားရောကျခဲ့ပွီး လှပတဲ့အခနျးအပွငျအဆငျခကျြမြားနဲ့ ဓာတျဖမျးခဲ့ပါတယျ။ ဗိုကျဗိုကျလေးနဲ့ ဓာတျဖမျးခဲ့တဲ့ ပုံလေးမြားကို ဒီးဒီက သူမရဲ့ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားခဲ့ပါတယျ။စန်ဒီမွငျ့လှငျတို့ဇနီးမောငျနှံနှဈဦးက အာထရောငျဆောငျးထဲက သမီးလေးရဲ့ လှုပျရှားမှုပုံရိပျမြားကို ကွညျ့ပွီး ကွညျနူးပီတိတှဝေခေဲ့ကွပါတယျ။ စန်ဒီမွငျ့လှငျကတော့ သမီးလေးကို အဖတေူသမီးလေးလို့ ကောကျခကျြခခြဲ့ပါတယျ။စန်ဒီမွငျ့လှငျရဲ့ ကိုယျဝနျက အခုဆိုရငျ (၂၉) ပတျ ရှိနပေါပွီ။ ပထမဦးဆုံး ရငျသှေးလေးက စန်ဒီမွငျ့လှငျ လိုခငျြနတေဲ့ သမီးလေး ကိုယျဝနျလှယျထားရမှနျး သိလိုကျရတဲ့ အခြိနျမှာ အပြျောကွီးပြျောနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ လိုခငျြနတေဲ့ သမီးဦးလေးဖွဈတာကွောငျ့လညျး အဈမဖွဈသူ စိုးမွတျနန်ဒာနဲ့ ညီမဖွဈသူ စိုးပွညျ့သဇငျတို့က ဂုဏျပွု Surprise တှေ လုပျပေးခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။ဒီးဒီရဲ့ကိုယျဝနျက တဖွညျးဖွညျးရငျ့လာတာနဲ့အမြှ လတျတလောမှာတော့ အနုပညာအလုပျမြား ရပျစဲထားပွီး ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ဆိုငျအတှကျ လိုအပျသမြှကို တတျနိုငျသမြှ လိုကျပါကူညီဆောငျရှကျပေးနတော တှရေ့ပါတယျ။
ချယ်လ်ဆီး သို့ မပြန်လိုပဲ အသလက်တီကို အသင်း မှာသာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆက်ကစား ချင်ပါတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ မိုရာတာ
Hey Buddy!, I found this information for you: "ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ဆိုင်မှာ လှလှလေး ဓာတ်ဖမ်းခဲ့တဲ့ ဗိုက်ဗိုက်လေးနဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်". Here is the website link: https://zeekwat.com.mm/archives/872. Thank you.